प्रकाशित समय: १७:५२:४७
यो कथा टिजियाना कैटोनको हो, जसले सेक्स भिडियो भाइरल भएका कारण आत्महत्या गरिन् ।
अप्रिल २०१५ मा नेपल्सको उपमहानगरिय मुग्नानो क्षेत्रमा बस्ने ३१ वर्षीया टिजियानाले ह्वाट्सएपमा पाँच जनालाई सेक्स भिडियो पठाइन् ।
उनको भिडियो छिटै कयौ एडल्ट वेभसाइटमा अपलोड गरीए ।
यद्यपि सेक्स भिडियोले केही नबिगारे पनि उनले भनेको एक वाक्यले उनलाई तहसनहस गरिदियो ।
भिडियोमा उनले सोधेकी छिन्, ‘तिमी भिडियो बनाइरहेका छाँै ब्रावो ।’
यी शब्दले के सन्देश दिन्छ भने उनी खुल्ला स्वभावकी केटी थिइन्, उनलाई सेक्सको समयमा भिडियो बनाउन मन पथ्र्यो ।
भिडियो हेर्ने मानिसलाई के लाग्यो भने यदि फिल्म गर्नमा त यति खुशी छ भने हेर्दा कुनै गुनासो गर्ने छैन ।
तर इटलीका मानिसहरूले केवल भिडियो मात्र हेरेनन्, उनको कमेन्टका साथै उनको फोटा टिसर्ट र वेभसाइडमा देखिन थाले ।
के सन्देश गयो भने यो सबै गरेर धेरै खुशी छ ।
यो सबै टिजियानाका लागि धेरै डरलाग्दो थियो ।
तर उनले यसको सामना गर्ने निर्णय गरिन् । तर कुनै यस्तो तरिका थिएन, उनी भाइरल भएको भिडियो हटाउन सक्थीन ।
उनले यो मुद्दालाई अदालतमा लिएर गइन् । अदालतलाई भनिन् कि उनको अनुमतिबिना भिडियो सार्वजनिक साइडमा अपलोड गरियो ।
यति सबै हुँदाहँदै पनि उनको जीवन सामान्य रहेन ।
उनकी आमा मारिया टेरेसा गिग्लियो भन्छिन्, ऊ बाहिर निस्कन चाहँदैन थिइन् ।
कैयौँ हप्ताको मानिसक पिडापछि आमा मारियाले आफ्नो छोरीको बारेमा पत्रकारलाई भन्ने हिक्मत जुटाइन् ।
उनले बीबीसीलाई भनिन् ‘मेरो छोरी राम्री केटी थिई तर उसलाई प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । जन्मँदै उसलाई बुबाको साथ थिएन । उसले उनलाई कहिल्यै भेटिन् । यसको असर उनको पूरा जीवनभरी पर्यो ।’
टिजियानाको मृत्युले मानिसहरूमा उनको भिडियो हेर्ने कौतुहल झन् बढायो ।
उनको आमाले ती सबै भिडियो हेरिन । ‘मैले सत्य थाह पाउनु थियो त्यसकारण ती सबै भिडियो हेर्न चाहन्थे । त्यो मेरी टिजियाना थिइन् ।’
उनलाई के लागेको छ भने उनकी छोरीलाई नशालु औषधि खुवाइयो । उनलाई लागेको छ, यो सबै एक आपराधिक षड्यन्त्र थियो ।
उनी के चाहन्छन् भने उनकी छोरीको पूर्व ब्वाइफ्रेन्ड डी पालो नै भनुन्, भिडियोहरू सेयर गर्नमा उनको भूमिका के थियो ?
‘उनले मेरो छोरी बचाउन मेरो सहयोग गरेनन् । सायद त्यो सत्य थाह पाउनका लागि मेरो सहयोग गर्न सकून ।’
नोभेम्बर २०१६ मा डी पालोसँग १० घण्टासम्म सोधपुछ भयो । अभियोजक जान्न चाहन्थे, के टिजियानालाई आत्म हत्याका लागि उक्साउन कसैको भूमिका थियो ?
टिजियानाको भिडियो अब मुख्य सर्च इन्जनमा पाइँदैन, तर उनको अस्तित्व अहिले पनि छ ।
उनकी आमा मारिया चाहन्छन्, इटली र युरोपीय सङ्घका बाँकी देश यस्तो तरिका विकसित गरुन्, जसको निजी अपलोड छिटो हटाउन सकियोस् ।